China Luxury ukupakisha izithambiso iiseti zeglasi iibhotile cream engenanto kunye iingqayi mveliso kunye nabathengisi | Jiamei
Ukupakisha kwezithambiso zexabiso eliphambili kuseta iiglasi ezingenanto zeebhotile zobuhle kunye neejagi
Umthamo: 30g, 50g, 30ml, 60ml, 100ml, 120ml
Umbala: Njengoko isicelo sakho
Ukusetyenziswa: i-emulsion, intsingiselo, ukhilimu wobuso kunye nabanye
Service: isilika screen, bexhentsa eshushu, frosting, ileyibhile, umbala yoshicilelo kunye nezinye iinkqubo
Igama lemveliso Iiseti zezithambiso zobuso bobuhle
Izibuko IShanghai, iLianyungang, iQingdao
Ukuhambisa ngenqanawe I-DHL, i-Fedex, i-UPS, imithwalo yomoya, ulwandle
OEM Njengoko isicelo sakho
Iiseti zokuthambisa zobuso bethu zoBuhle zinembonakalo entekenteke. Zenziwe ngeglasi entle kwaye iglasi inokuyilwa ngemibala eyahlukeneyo ngokweemfuno zakho. Intamo yebhotile kunye nesiciko kukrolwe ipateni yokukhanya yesitayile esikhanyayo, esenza ukuba ibhotile iyonke ijongeke ibutofotofo kwaye intekenteke. inqanaba lokubonakala liphezulu kuphela, kwaye umsebenzi unamandla kakhulu. Abathengi bayaluthanda kakhulu olu hlobo lokupakisha ngenqanaba eliphezulu lokubonakala. Ibhotile yekrimu iza nesiciko kunye negasket etsalwe ngesandla. amanzi kunye nokwenza into yokuthambisa Ibhotile ifaniswe nentloko yokuchela.
Ubungakanani bebhotile yekhrimu yi-30g, 50g Iinkcukacha zeebhotile zokwenza amanzi kunye neebhotile zokuthambisa zi-30ml, 60ml, 100ml kunye ne-120ml.
Ezi bhotile zenziwe ngeglasi eqinileyo, eqinileyo yeglasi enokuhlanjwa kwaye iphinde isetyenziswe xa ingenanto, ke ilunge kakhulu.Sicela uqiniseke ngomgangatho wayo, kukuhlolwa komgangatho, nceda uqiniseke ukuba uyakusebenzisa. Isikrini sesilika, ukunyathela okushushu, ukuqabaka, ileyibhile, umbala wokuprinta kunye nezinye iinkqubo, ukuze sikwazi ukwenza amagama ahlukeneyo kunye neepateni ozifunayo.
Xa ukhetha imveliso, ungaqhagamshelana nomthengisi wethu ukuze ubonane neminye imibuzo ofuna ukuyazi.Ukuba kunyanzelekile, siya kukuthumelela isampuli yokuqinisekisa kwakho isitayile.Ukuba uhlawule idipozithi, siya kuqala ukuvelisa kwaye Okokugqibela, iimpahla ziya kuthunyelwa kuwe (indlela yothutho eneenkcukacha), kwaye uya kuzihlola iimpahla, uhambise intlawulo eseleyo, kwaye ugqibezele iodolo.
Sinabasebenzi abagqwesileyo beenkonzo zokumamela iingxaki zakho kwaye sikubonelele ngezisombululo.
Umgaqo wethu wenkonzo ngumthengi kuqala, inkonzo yokuqala! Sinethemba lokuseka ubudlelwane beshishini kunye nawe kwaye sijonge phambili kuphando lwakho.
Egqithileyo Iibhotile zeglasi ezisisiseko esincinci esise-oval
Okulandelayo: Uthotho oluphezulu lweLancome lweebhotile zokupakisha izikhumba zamadoda